We Are Here To Help You To Become Successful In Your Life
Frank May 3, 2019 Health0Comments
အရပ်ရှည်ခြင်းဟာ သင့်မိဘရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ တိုက်ရိုက် ပတ်သက်နေသလို သင်နေထိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ၆၀% ကနေ ၈၀% အထိက မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ သက်ဆိုင်နေပြီး ၂၀% ကနေ ၄၀% အထိက သင့်ရဲ့ လူနေမှုပုံစံနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားစေတဲ့ တစ်ရှုးတွေရှိတဲ့နေရာ ပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ သင့်အရပ်ဟာ ပိုရှည်လာမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီ ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားစေတဲ့ တစ်ရှုးတွေရှိတဲ့နေရာရဲ့တံခါး ပိတ်မသွားခင် အချိန်အတွင်း အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အသုံးပြုပြီး သင်အရပ်ပိုရှည်အောင် ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်စဉ်အခါက သင် စားသုံးခဲ့တဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ သင်ကြီးလာတဲ့အခါ ပိန်တာ၊ ဝတာ၊ အရပ်ရှည်တာ၊ အရပ်ပုတာတွေအပေါ် များစွာ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေဟာ သင့်ရဲ့အရပ်တစ်ခုတည်းကို သက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပဲ သင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ လူနေမှုပုံစံ ကိုပါ သက်ရောက်မှုရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အရပ်ရှည်ခြင်းဟာ သင့်မိသားစုရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ များစွာ သက်ဆိုင်ပါတယ်
အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း အရပ်ဟာ မျိုးရိုးဗီဇ လက္ခဏာတွေနဲ့ များစွာ ပက်သတ်မှုရှိနေပါတယ်။ သို့သော် သင့်မှာ အရပ်ပုတဲ့မိဘတွေရှိနေလို့ သင်လည်းအရပ်ပုမယ်လို့ တိုက်ရိုက်မပြောနိုင်သလို သင့်မှာ အရပ်ရှည်တဲ့ မိဘတွေရှိနေလို့ သင်လည်းအရပ်ရှည်မယ်လို့ တိုက်ရိုက်မပြောနိုင်ပါဘူး။ တကယ်တော့ အရွယ်မရောက်ခင်အချိန်(အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်ဝန်းကျင်)အထိ သင် ဘယ်လောက်အရပ်ရှည်မယ်ဆိုတာကို အတိအကျသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်မိဘတွေရဲ့ အရပ်အမြင့်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး သင် ဘယ်လောက်ထိ အရပ်ရှည်မယ်ကို ခန့်မှန်း၊ တွက်ယူနိုင်ပါတယ်။ (အတိအကျ မမှန်နိုင်ပေမယ့် အနီးစပ်ဆုံးတော့ ရမှာပါ)
– ပထမဆုံး သင်လုပ်ရမှာက သင့်အဖေနဲ့ အမေရဲ့ အရပ်အမြင့်ကို ပေါင်းပါ
ဥပမာ – ၅ ပေ ၉ လက္မ + ၅ ပေ = ၁၀ ပေ ၉ လက္မ
– သင်ဟာ ယောက်ျားလေးဆိုရင် ထိုရလဒ်မှာ ၅ လက်မ ပေါင်းထည့်ပြီး သင်ဟာ မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ ထိုရလဒ်မှ ၅ လက်မကိုနှုတ်ပါ
ဥပမာ – ၁၀ ပေ ၉ လက္မ + ၅ လက္မ = ၁၁ ပေ ၂ လက္မ
– ပြီးရင် ရလဒ်ကို ၂ နဲ့ စားပါ
ဥပမာ – ၁၁ ပေ ၂ လက္မ ÷ ၂ = ၅ ပေ ၆ လက္မ
– နောက်ဆုံးရလာတဲ့အဖြေကတော့ သင့်ရဲ့အရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၄ လက်မလောက် ပိုတာ၊ လိုတာ ရှိနိုင်ပါတယ်။
၂။ ကြီးထွားမှုကို ရပ်တန့်စေတဲ့အရာတွေကို ရှောင်ကြည်ပါ
သင့်အရပ် ပိုရှည်လာအောင် သင်လုပ်နိုင်တာ အများအပြားမရှိပေမယ့် သင့်ကြီးထွား၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု ရပ်တန့်မသွားအောင်တော့ သင် များစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အရွယ်မတိုင်မီ အရက်သေစာနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုမှီဝဲခြင်းဟာ သင့် ကြီးထွားမှုနှုန်းအတွက် အလွန်ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေပါတယ်။ အာဟာရ ပြည့်ပြည့်ဝဝ မရရှိခြင်းကလည်း အလားတူ ဆိုးကျိုးကို ကြုံတွေ့စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
– ကော်ဖီသောက်ခြင်းဟာ သင့်ကြီးထွားမှုကို သက်ရောက်မှုရှိပါသလား? သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရဆိုရင်တော့ ကဖိန်းဓာတ်ဟာ သင့်ကြီးထွားမှုကို တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကဖိန်းဓာတ်က သင့်ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်စက်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးငယ်တွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် လူငယ်တွေဟာ တစ်ရက်ကို အိပ်ချိန် ၈ နာရီကနေ ၁၁ နာရီအထိ လိုအပ်ကြပါတယ်။
– ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကရော သင့်ကြီးထွားမှုကို သက်ရောက်မှုရှိပါသလား? ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း (သို့) ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်းခြင်းက ကြီးထွားမှုကို တိုက်ရိုက်ထိရောက်မှုရှိမနေပေမယ့် ကိုလန်ဘီယာတက္ကသိုလ်ရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အင်တာနက်စာမျက်နှာရဲ့ အဆိုအရ ‘ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူ (သို့) ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူရဲ့ သား၊ သမီးတွေဟာ ဆေးလိပ်မသောက်သုံးသူ (သို့) ဆေးလိပ် မသောက်သုံးသူရဲ့ သား၊ သမီးတွေထက် အရပ် ပိုပုလေ့ရှိတယ်’ လို့သိရပါတယ်။
၃။ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်စက်ပါ
သုတေသနတွေရဲ့ အကြံပြုချက်အရ ဆယ်ကျော်သက်တွေနဲ့ ကလေးတွေဟာ ညတိုင်း အိပ်စက်ချိန် ၈ နာရီကနေ ၁၁ နာရီအထိ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းမှာ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားခြင်းဟာ သင် အိပ်စက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် သင်အိပ်စက်နေတဲ့အချိန် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆူညံ့နေတာမျိုး၊ မလိုအပ်တဲ့ အလင်းရောင်တွေရှိနေတာမျိုးကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ သင် အိပ်မပျော်တဲ့နေ့တွေ ကြုံတွေ့လာခဲ့ရင် ရေနွေးနွေးလေး ချိုးတာမျိုး (သို့) ကဖိန်းဓာတ်မပါတဲ့ လက်ဖက်ရည်တစ်မျိုးမျိုး သောက်တာမျိုးကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အိပ်ရေးဝအောင်သာ မအိပ်ရရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားမှုကို များစွာ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
– Human Growth Hormone(HGH) လို့ခေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဟော်မုန်းတွေကို သင် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ထုတ်ပေးပါတယ်။ အပြင်လောကမှာ HGH ပါဝင်တဲ့ အရပ်ရှည်ဆေးတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ သောက်ဆေးတွေရှိသလို ထိုးဆေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီလိုဆေးတွေမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေများတာကြောင့် မသုံးစွဲခင် ဆရာဝန်ရဲ့ အကြံပြုချက်ကို ရယူသင့်ပါတယ်။
Related Post : ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းကြမလဲ
– သင်အိပ်စက်နေတဲ့အချိန်မှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို တတ်နိုင်သမျှ ဆန့်ထားပါ။ ကွေးကွေးလေးအိပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပက်လက်လှန်ကာ ခြေထောက်၊ လက်တွေကို ဆန့်နိုင်သမျှဆန့်ထားပြီး သင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ အနားပေးပါ။ ဒီလိုအိပ်စက်ခြင်းဟာ ချက်ခြင်းနေသားမကျပေမယ့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ခေါင်းအုံးကို အသုံးမပြုဘဲ အိပ်စက်ခြင်းကလည်း သင့်ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားရေးအတွက် များစွာ အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တို့ဟာလည်း သင့်အရပ်ရှည်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်တွေကို အစားအစာတွေက များစွာရရှိနိုင်တာကြောင့် မနက်စာ၊ နေ့လယ်စာနဲ့ ညစာတို့ကို ပုံမှန်စားသုံးသင့်ပါတယ်။ အသေးစိတ် အကြံပြုချက်တွေကိုတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
– ကစီဓာတ်နဲ့ ကယ်လိုရီတွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုအတွက် အင်အားတွေ ဖြည့်စီးပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ များစွာပါဝင်တဲ့ အစား၊ အစာတွေကို သင် စားသုံးသင့်ပါတယ်။
– ကယ်လ်ဆီယံဓာတ် များစွာပါဝင်တဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အစိမ်းရောင် အသီး၊ အရွက်တွေကို များများစားသုံးပေးပါ။ အကြောင်းရင်းမှာ ကယ်လ်ဆီယံဓာတ်ဟာ အရိုးတွေကိုသန်မာစေပြီး အရိုးပွခြင်းရောဂါမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
– နီကိုတင်းဓာတ် ၅၀၀ မီလီဂရမ် ပမာဏဟာလည်း ကြီးထွားမှုဟော်မုန်းတွေကို သိသိသာသာ တိုးပွားစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗိုက်ထဲမှာ အစာမရှိတဲ့ အချိန်မှသာ အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
– ဗီတာမင် ဒီ(Vitamin D)ဟာ ကလေးတွေရဲ့ အရိုးအဆစ်တွေနဲ့ ကြွက်သားတွေ သန်မာဖို့အတွက် များစွား အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ ဗီတာမင် ဒီ ချို့တည်းမှုကြောင့် ကြီးထွားခြင်းရပ်တန့်တာ၊ အဝလွန်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် ဒီ ကို ငါး၊ ငါးကြီးဆီ၊ မှိုတို့မှရရှိနိုင်သလို အပူမပြင်းတဲ့ နေရောင်ခြည်ကလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
– ပရိုတိန်းဓာတ်ကလည်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုအတွက် မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ ပရိုတိန်းဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို နေ့စဉ် စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ပရိုတိန်းဓာတ်များစွာပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကတော့ အသား၊ ဒိန်ခဲ၊ ကြက်ဥ၊ ပဲ၊ တို့ဟူးနဲ့ အစေ့တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
– ဇင့်ဓာတ်ဟာလည်း ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုအတွက် အလွန်အရေးပါပါတယ်။ ဇင့်ဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်လည်း ခလေးတွေရဲ့ ကြီးထွားမှုနှုန်းကို ရပ်တန့်စေပါတယ်။ ဇင့်ဓာတ်ကို ချောကလတ်၊ ဥများ၊ မြေပဲ တို့မှရရှိနိုင်ပါတယ်။
၅။ ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် နေပါ
ကလေးဘဝတုန်းက မကျန်းမမာဖြစ်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Vitamin C(ဗီတာမင် စီ) ပါဝင်တဲ့ လိမ္မော်သီး၊ သံပရိုသီးနဲ့ ရှောက်ခါးသီးတို့ကို စားသုံးပြီးတော့ ဒီအချက်ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်မှာ ဘာမှမလုပ်ဘဲ နားနေခြင်းကလည်း များစွာအကျိုးရှိပါတယ်။
– ကိုယ်ခံအားကောင်းနေဖို့အတွက် အမြဲတမ်း လတ်ဆတ်တဲ့ အစား၊ အသောက်တွေကိုပဲ သုံးဆောင်ပါ။
– ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတဲ့ အစား၊ အစာတွေကို စားပါ။ ခုကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့အတွက် သစ်သီးမျိုးစုံကို စားသုံးနိုင်သလို၊ အသီး၊ အရွက်တွေကိုလည်း စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ omega3ပါဝင်တဲ့ ငါးကြီးဆီကိုလည်း သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ရေကို တစ်နေ့မှာ ဖန်ခွက် ၆ ခွက်ကနေ ၈ ခွက်အထိ သာက်သုံးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုရှိတာက ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားစေတဲ့ တစ်ရှုးတွေရှိတဲ့နေရာရဲ့တံခါး ပိတ်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာ ထိရောက်မှု မရှိတော့ပါဘူး။ သင့် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားနေဆဲဆိုရင်တော့ ရေကူးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းအပါအဝင် အခြားသော အားကစားတွေကိုပြုလုပ်ရင်း အစားအသောက်လည်းမှန်နေမယ်၊ အိပ်ရေးလည်း ဝအောင်အိပ်နေရမယ်ဆိုရင် သင့် အရပ်ကို ပိုရှည်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
– ကိုယ်၊ လက် ဆန့်ပြီးလုပ်ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးဟာ အရပ်ရှည်ဖို့အတွက် များစွာ အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားစေတဲ့ တစ်ရှုးတွေရှိတဲ့နေရာရဲ့တံခါး ပိတ်သွားပြီ ဆိုရင်တောင် တစ်ခါတစ်ရံ ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးဟာ သင့်အရပ်ကို ပိုရှည်လာစေပါတယ်။ ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အိပ်ရာထထချင်းတစ်ကြိမ်၊ အိပ်ရာမဝင်ခင်တစ်ကြိမ်။
– ရေကူးခြင်းဟာလည်း ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အကြောတွေ၊ ကြွက်သားတွေကို ဆန့်ပြီး ပြုလုပ်ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်တာကြောင့် အရပ်ရှည်ဖို့အတွက် များစွာ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
၇။ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ
သင့်မိဘတွေက အရပ်ရှည်ကြပေမယ့် သင်ကအရပ်ပုနေတယ်၊ အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း အိပ်ရေးဝဝအိပ်တယ်၊ အစားသောက်လည်း မှန်တယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလည်း လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် သင့်အရပ်ဟာ ပိုရှည်မလာဘူး ဆိုရင်တော့ တခြား အကြောင်းအရာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာ အကောင်းဆုံးပါ။
အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ အရပ်ရှည်ခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အကြံပြုချက် ၇ ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးဟာ သင့်အတွက် များစွာ အထောက်အကုပြုမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို သင် ကြိုက်နှစ်သက်တယ်၊ နောက်လည်း ဒီလိုဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Facebook Page ကို Like & See First လုပ်ထားဖို့ရယ်၊ ဒီ post ကို share ပေးဖို့ရယ် တိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်။ အကြံပြု၊ ဆွေးနွေးချင်တာရှိရင် comment မှာရေးခဲ့နိုင်သလို၊ chat box မှလည်းလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Related Post : 🌞 ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတုမှာ ဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲ 🌞
အရပျရှညျခွငျးဟာ သငျ့မိဘရဲ့ မြိုးရိုးဗီဇနဲ့ တိုကျရိုကျ ပတျသကျနသေလို သငျနထေိုငျတဲ့ ပတျဝနျးကငျြနဲ့လညျး သကျဆိုငျနပေါတယျ။ ၆၀% ကနေ ၈၀% အထိက မြိုးရိုးဗီဇနဲ့ သကျဆိုငျနပွေီး ၂၀% ကနေ ၄၀% အထိက သငျ့ရဲ့ လူနမှေုပုံစံနဲ့ သကျဆိုငျပါတယျ။ တကယျတော့ ခန်ဓာကိုယျကွီးထှားစတေဲ့ တဈရှုးတှရှေိတဲ့နရော ပိတျသှားတဲ့အခြိနျမှာ သငျ့အရပျဟာ ပိုရှညျလာမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီ ခန်ဓာကိုယျ ကွီးထှားစတေဲ့ တဈရှုးတှရှေိတဲ့နရောရဲ့တံခါး ပိတျမသှားခငျ အခြိနျအတှငျး အောကျမှာဖျောပွထားတဲ့ နညျးလမျးတှနေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို အသုံးပွုပွီး သငျအရပျပိုရှညျအောငျ ကွိုးစားနိုငျပါတယျ။ ငယျရှယျစဉျအခါက သငျ စားသုံးခဲ့တဲ့ အစားအစာတှနေဲ့ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးတှဟော သငျကွီးလာတဲ့အခါ ပိနျတာ၊ ဝတာ၊ အရပျရှညျတာ၊ အရပျပုတာတှအေပျေါ မြားစှာ သကျရောကျမှုရှိပါတယျ။ အောကျမှာဖျောပွထားတဲ့ နညျးလမျးတှဟော သငျ့ရဲ့အရပျတဈခုတညျးကို သကျရောကျမှုရှိမှာမဟုတျပဲ သငျ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ လူနမှေုပုံစံ ကိုပါ သကျရောကျမှုရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
၁။ အရပျရှညျခွငျးဟာ သငျ့မိသားစုရဲ့ မြိုးရိုးဗီဇနဲ့ မြားစှာ သကျဆိုငျပါတယျ
အပျေါမှာ ဖျောပွခဲ့တဲ့အတိုငျး အရပျဟာ မြိုးရိုးဗီဇ လက်ခဏာတှနေဲ့ မြားစှာ ပကျသတျမှုရှိနပေါတယျ။ သို့သျော သငျ့မှာ အရပျပုတဲ့မိဘတှရှေိနလေို့ သငျလညျးအရပျပုမယျလို့ တိုကျရိုကျမပွောနိုငျသလို သငျ့မှာ အရပျရှညျတဲ့ မိဘတှရှေိနလေို့ သငျလညျးအရပျရှညျမယျလို့ တိုကျရိုကျမပွောနိုငျပါဘူး။ တကယျတော့ အရှယျမရောကျခငျအခြိနျ(အသကျနှဈဆယျကြျောဝနျးကငျြ)အထိ သငျ ဘယျလောကျအရပျရှညျမယျဆိုတာကို အတိအကသြိနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျ့မိဘတှရေဲ့ အရပျအမွငျ့ပျေါမှာ မူတညျပွီး သငျ ဘယျလောကျထိ အရပျရှညျမယျကို ခနျ့မှနျး၊ တှကျယူနိုငျပါတယျ။ (အတိအကြ မမှနျနိုငျပမေယျ့ အနီးစပျဆုံးတော့ ရမှာပါ)
– ပထမဆုံး သငျလုပျရမှာက သငျ့အဖနေဲ့ အမရေဲ့ အရပျအမွငျ့ကို ပေါငျးပါ
ဥပမာ – ၅ ပေ ၉ လက်မ + ၅ ပေ = ၁၀ ပေ ၉ လက်မ
– သငျဟာ ယောကျြားလေးဆိုရငျ ထိုရလဒျမှာ ၅ လကျမ ပေါငျးထညျ့ပွီး သငျဟာ မိနျးကလေးဆိုရငျတော့ ထိုရလဒျမှ ၅ လကျမကိုနှုတျပါ
ဥပမာ – ၁၀ ပေ ၉ လက်မ + ၅ လက်မ = ၁၁ ပေ ၂ လက်မ
– ပွီးရငျ ရလဒျကို ၂ နဲ့ စားပါ
ဥပမာ – ၁၁ ပေ ၂ လက်မ ÷ ၂ = ၅ ပေ ၆ လက်မ
– နောကျဆုံးရလာတဲ့အဖွကေတော့ သငျ့ရဲ့အရပျပဲဖွဈပါတယျ။ ၄ လကျမလောကျ ပိုတာ၊ လိုတာ ရှိနိုငျပါတယျ။
၂။ ကွီးထှားမှုကို ရပျတနျ့စတေဲ့အရာတှကေို ရှောငျကွညျပါ
သငျ့အရပျ ပိုရှညျလာအောငျ သငျလုပျနိုငျတာ အမြားအပွားမရှိပမေယျ့ သငျ့ကွီးထှား၊ ဖှံ့ဖွိုးမှု ရပျတနျ့မသှားအောငျတော့ သငျ မြားစှာလုပျဆောငျနိုငျပါတယျ။ အရှယျမတိုငျမီ အရကျသစောနဲ့ မူးယဈဆေးဝါးတှကေိုမှီဝဲခွငျးဟာ သငျ့ ကွီးထှားမှုနှုနျးအတှကျ အလှနျကို အဟနျ့အတားဖွဈစပေါတယျ။ အာဟာရ ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ မရရှိခွငျးကလညျး အလားတူ ဆိုးကြိုးကို ကွုံတှစေ့မှော ဖွဈပါတယျ။
– ကျောဖီသောကျခွငျးဟာ သငျ့ကွီးထှားမှုကို သကျရောကျမှုရှိပါသလား? သိပ်ပံနညျးကြ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရဆိုရငျတော့ ကဖိနျးဓာတျဟာ သငျ့ကွီးထှားမှုကို တိုကျရိုကျ သကျရောကျမှုမရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကဖိနျးဓာတျက သငျ့ကို နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျအိပျစကျဖို့ ကူညီပေးနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ကလေးငယျတှနေဲ့ ဆယျကြျောသကျအရှယျ လူငယျတှဟော တဈရကျကို အိပျခြိနျ ၈ နာရီကနေ ၁၁ နာရီအထိ လိုအပျကွပါတယျ။
– ဆေးလိပျသောကျခွငျးကရော သငျ့ကွီးထှားမှုကို သကျရောကျမှုရှိပါသလား? ဆေးလိပျသောကျခွငျး (သို့) ဆေးလိပျသောကျတဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာနထေိုငျးခွငျးက ကွီးထှားမှုကို တိုကျရိုကျထိရောကျမှုရှိမနပေမေယျ့ ကိုလနျဘီယာတက်ကသိုလျရဲ့ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ အငျတာနကျစာမကျြနှာရဲ့ အဆိုအရ ‘ဆေးလိပျသောကျသုံးသူ (သို့) ဆေးလိပျသောကျသုံးသူရဲ့ သား၊ သမီးတှဟော ဆေးလိပျမသောကျသုံးသူ (သို့) ဆေးလိပျ မသောကျသုံးသူရဲ့ သား၊ သမီးတှထေကျ အရပျ ပိုပုလရှေိ့တယျ’ လို့သိရပါတယျ။
၃။ အိပျရေးဝအောငျ အိပျစကျပါ
သုတသေနတှရေဲ့ အကွံပွုခကျြအရ ဆယျကြျောသကျတှနေဲ့ ကလေးတှဟော ညတိုငျး အိပျစကျခြိနျ ၈ နာရီကနေ ၁၁ နာရီအထိ ရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ။ အကွောငျးရငျးမှာ ခန်ဓာကိုယျကွီးထှားခွငျးဟာ သငျ အိပျစကျနတေဲ့အခြိနျမှာ ဖွဈပျေါနလေို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖွဈနိုငျရငျ သငျအိပျစကျနတေဲ့အခြိနျ ပတျဝနျးကငျြမှာ ဆူညံ့နတောမြိုး၊ မလိုအပျတဲ့ အလငျးရောငျတှရှေိနတောမြိုးကို ရှောငျရှားသငျ့ပါတယျ။ သငျ အိပျမပြျောတဲ့နတှေ့ေ ကွုံတှလေ့ာခဲ့ရငျ ရနှေေးနှေးလေး ခြိုးတာမြိုး (သို့) ကဖိနျးဓာတျမပါတဲ့ လကျဖကျရညျတဈမြိုးမြိုး သောကျတာမြိုးကို ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ အိပျရေးဝအောငျသာ မအိပျရရငျ သငျ့ခန်ဓာကိုယျ ကွီးထှားမှုကို မြားစှာ ထိခိုကျနိုငျပါတယျ။
– Human Growth Hormone(HGH) လို့ချေါတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကွီးထှားဟျောမုနျးတှကေို သငျ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျပြျောနတေဲ့အခြိနျမှာ သငျ့ခန်ဓာကိုယျက ထုတျပေးပါတယျ။ အပွငျလောကမှာ HGH ပါဝငျတဲ့ အရပျရှညျဆေးတှကေို လှယျလှယျကူကူ ဝယျယူသုံးစှဲနိုငျပါတယျ။ သောကျဆေးတှရှေိသလို ထိုးဆေးတှလေညျးရှိပါတယျ။ ဒီလိုဆေးတှမှော ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှမြေားတာကွောငျ့ မသုံးစှဲခငျ ဆရာဝနျရဲ့ အကွံပွုခကျြကို ရယူသငျ့ပါတယျ။
– သငျအိပျစကျနတေဲ့အခြိနျမှာ သငျ့ခန်ဓာကိုယျကို တတျနိုငျသမြှ ဆနျ့ထားပါ။ ကှေးကှေးလေးအိပျတာမြိုးမဟုတျဘဲ ပကျလကျလှနျကာ ခွထေောကျ၊ လကျတှကေို ဆနျ့နိုငျသမြှဆနျ့ထားပွီး သငျ့ ခန်ဓာကိုယျကို ပွညျ့ပွညျ့ဝဝ အနားပေးပါ။ ဒီလိုအိပျစကျခွငျးဟာ ခကျြခွငျးနသေားမကပြမေယျ့ ရကျအနညျးငယျအတှငျး အဆငျပွသှေားမှာပါ။ ခေါငျးအုံးကို အသုံးမပွုဘဲ အိပျစကျခွငျးကလညျး သငျ့ခန်ဓာကိုယျ ကွီးထှားရေးအတှကျ မြားစှာ အထောကျအကူ ပွုပါတယျ။
ဗီတာမငျနဲ့ သတ်တုဓာတျတို့ဟာလညျး သငျ့အရပျရှညျရေးအတှကျ မရှိမဖွဈပါပဲ။ လိုအပျတဲ့ ဓာတျတှကေို အစားအစာတှကေ မြားစှာရရှိနိုငျတာကွောငျ့ မနကျစာ၊ နလေ့ယျစာနဲ့ ညစာတို့ကို ပုံမှနျစားသုံးသငျ့ပါတယျ။ အသေးစိတျ အကွံပွုခကျြတှကေိုတော့ အောကျမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
– ကစီဓာတျနဲ့ ကယျလိုရီတှကေ သငျ့ခန်ဓာကိုယျကွီးထှားမှုအတှကျ အငျအားတှေ ဖွညျ့စီးပေးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့ မြားစှာပါဝငျတဲ့ အစား၊ အစာတှကေို သငျ စားသုံးသငျ့ပါတယျ။
– ကယျလျဆီယံဓာတျ မြားစှာပါဝငျတဲ့ နို့ထှကျပစ်စညျးတှနေဲ့ အစိမျးရောငျ အသီး၊ အရှကျတှကေို မြားမြားစားသုံးပေးပါ။ အကွောငျးရငျးမှာ ကယျလျဆီယံဓာတျဟာ အရိုးတှကေိုသနျမာစပွေီး အရိုးပှခွငျးရောဂါမှလညျး ကာကှယျပေးနိုငျလို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
– နီကိုတငျးဓာတျ ၅၀၀ မီလီဂရမျ ပမာဏဟာလညျး ကွီးထှားမှုဟျောမုနျးတှကေို သိသိသာသာ တိုးပှားစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဗိုကျထဲမှာ အစာမရှိတဲ့ အခြိနျမှသာ အလုပျလုပျမှာဖွဈပါတယျ။
– ဗီတာမငျ ဒီ(Vitamin D)ဟာ ကလေးတှရေဲ့ အရိုးအဆဈတှနေဲ့ ကွှကျသားတှေ သနျမာဖို့အတှကျ မြားစှား အထောကျအကူ ပွုပါတယျ။ ဗီတာမငျ ဒီ ခြို့တညျးမှုကွောငျ့ ကွီးထှားခွငျးရပျတနျ့တာ၊ အဝလှနျတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဗီတာမငျ ဒီ ကို ငါး၊ ငါးကွီးဆီ၊ မှိုတို့မှရရှိနိုငျသလို အပူမပွငျးတဲ့ နရေောငျခွညျကလညျး ရရှိနိုငျပါတယျ။
– ပရိုတိနျးဓာတျကလညျး သငျ့ခန်ဓာကိုယျကွီးထှားမှုအတှကျ မရှိမဖွဈပါပဲ။ ပရိုတိနျးဓာတျပွညျ့ဝတဲ့ အစားအစာတှကေို နစေ့ဉျ စားသုံးသငျ့ပါတယျ။ ပရိုတိနျးဓာတျမြားစှာပါဝငျတဲ့ အစားအစာတှကေတော့ အသား၊ ဒိနျခဲ၊ ကွကျဥ၊ ပဲ၊ တို့ဟူးနဲ့ အစတေို့ပဲဖွဈပါတယျ။
– ဇငျ့ဓာတျဟာလညျး ခန်ဓာကိုယျကွီးထှားမှုအတှကျ အလှနျအရေးပါပါတယျ။ ဇငျ့ဓာတျခြို့တဲ့ခွငျးကွောငျ့လညျး ခလေးတှရေဲ့ ကွီးထှားမှုနှုနျးကို ရပျတနျ့စပေါတယျ။ ဇငျ့ဓာတျကို ခြောကလတျ၊ ဥမြား၊ မွပေဲ တို့မှရရှိနိုငျပါတယျ။
၅။ ကိုယျခံအားကောငျးအောငျ နပေါ
ကလေးဘဝတုနျးက မကနျြးမမာဖွဈခွငျးဟာ သငျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကွီးထှားမှုကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Vitamin C(ဗီတာမငျ စီ) ပါဝငျတဲ့ လိမ်မျောသီး၊ သံပရိုသီးနဲ့ ရှောကျခါးသီးတို့ကို စားသုံးပွီးတော့ ဒီအခကျြကို ကာကှယျနိုငျပါတယျ။ နမေကောငျးဖွဈနခြေိနျမှာ ဘာမှမလုပျဘဲ နားနခွေငျးကလညျး မြားစှာအကြိုးရှိပါတယျ။
– ကိုယျခံအားကောငျးနဖေို့အတှကျ အမွဲတမျး လတျဆတျတဲ့ အစား၊ အသောကျတှကေိုပဲ သုံးဆောငျပါ။
– ကနျြးမာရေးကို အထောကျအကူပွုတဲ့ အစား၊ အစာတှကေို စားပါ။ ခုကိုယျခံအားကောငျးဖို့အတှကျ သဈသီးမြိုးစုံကို စားသုံးနိုငျသလို၊ အသီး၊ အရှကျတှကေိုလညျး စားသုံးနိုငျပါတယျ။ omega3ပါဝငျတဲ့ ငါးကွီးဆီကိုလညျး သုံးဆောငျနိုငျပါတယျ။ ရကေို တဈနမှေ့ာ ဖနျခှကျ ၆ ခှကျကနေ ၈ ခှကျအထိ သာကျသုံးဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ။
ဒီနရောမှာ တဈခုရှိတာက ခန်ဓာကိုယျ ကွီးထှားစတေဲ့ တဈရှုးတှရှေိတဲ့နရောရဲ့တံခါး ပိတျသှားပွီ ဆိုရငျတော့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျးဟာ ထိရောကျမှု မရှိတော့ပါဘူး။ သငျ့ ခန်ဓာကိုယျကွီးထှားနဆေဲဆိုရငျတော့ ရကေူးခွငျး၊ စကျဘီးစီးခွငျး၊ လမျးလြှောကျခွငျးအပါအဝငျ အခွားသော အားကစားတှကေိုပွုလုပျရငျး အစားအသောကျလညျးမှနျနမေယျ၊ အိပျရေးလညျး ဝအောငျအိပျနရေမယျဆိုရငျ သငျ့ အရပျကို ပိုရှညျလာစမှောဖွဈပါတယျ။
– ကိုယျ၊ လကျ ဆနျ့ပွီးလုပျရတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးမြိုးဟာ အရပျရှညျဖို့အတှကျ မြားစှာ အထောကျအကူ ပွုပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျ ကွီးထှားစတေဲ့ တဈရှုးတှရှေိတဲ့နရောရဲ့တံခါး ပိတျသှားပွီ ဆိုရငျတောငျ တဈခါတဈရံ ဒီလိုလကေ့ငျြ့ခနျးမြိုးဟာ သငျ့အရပျကို ပိုရှညျလာစပေါတယျ။ ဒီလိုလကေ့ငျြ့ခနျးမြိုးကို တဈနေ့ နှဈကွိမျအနညျးဆုံးပွုလုပျသငျ့ပါတယျ။ အိပျရာထထခငျြးတဈကွိမျ၊ အိပျရာမဝငျခငျတဈကွိမျ။
– ရကေူးခွငျးဟာလညျး ခန်ဓာကိုယျမှာရှိတဲ့ အကွောတှေ၊ ကွှကျသားတှကေို ဆနျ့ပွီး ပွုလုပျရတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးဖွဈတာကွောငျ့ အရပျရှညျဖို့အတှကျ မြားစှာ အထောကျအကူပွုပါတယျ။
၇။ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးပါ
သငျ့မိဘတှကေ အရပျရှညျကွပမေယျ့ သငျကအရပျပုနတေယျ၊ အပျေါမှာဖျောပွထားတဲ့အတိုငျး အိပျရေးဝဝအိပျတယျ၊ အစားသောကျလညျး မှနျတယျ၊ လကေ့ငျြ့ခနျးလညျး လုပျတယျ၊ ဒါပမေယျ့ သငျ့အရပျဟာ ပိုရှညျမလာဘူး ဆိုရငျတော့ တခွား အကွောငျးအရာတှကွေောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျတာကွောငျ့ ဆရာဝနျနဲ့ အမွနျဆုံး တိုငျပငျဆှေးနှေးတာ အကောငျးဆုံးပါ။
အပျေါမှာ ဖျောပွထားတာကတော့ အရပျရှညျခွငျးနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ အကွံပွုခကျြ ၇ ခကျြပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးဟာ သငျ့အတှကျ မြားစှာ အထောကျအကုပွုမယျလို့ ယူဆပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးကို သငျ ကွိုကျနှဈသကျတယျ၊ နောကျလညျး ဒီလိုဆောငျးပါးတှကေို ဖတျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ကြှနျတျောတို့ Facebook Page ကို Like & See First လုပျထားဖို့ရယျ၊ ဒီ post ကို share ပေးဖို့ရယျ တိုကျတှနျးပေးခငျြပါတယျ။ အကွံပွု၊ ဆှေးနှေးခငျြတာရှိရငျ comment မှာရေးခဲ့နိုငျသလို၊ chat box မှလညျးလာရောကျမေးမွနျးနိုငျပါတယျ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
Previous Previous post: အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို အိမ်မှာနေရင်း လေ့လာနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၁၀ ခု
Next Next post: အောင်မြင်၊ ကျော်ကြားသူတွေရဲ့ အလေ့အထကောင်း (၇) ခု
🌞 ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတုမှာ ဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲ 🌞
Thunn April 22, 2019
ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းကြမလဲ
Thunn April 18, 2019
Good Communication Skills – Key to Any Success
မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းက မိမိကိုယ်ကို တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအတွက် တကယ် အကူအညီဖြစ်စေပါသလား?
Egg, Potato And Coffee
သင့်​ရဲ့ ကိုယ်​ရည်​ကိုယ်​​သွေးတိုးတက်​မှုကို မြန်​မြန်​ဆန်​ဆန်​ မြှင့်​တင်​​နိုင်​​အောင်​ ကူညီ​ပေးနိုင်​မယ့်​ နည်းလမ်း (၁၀) ခု
အာင်မြင်ဖို့အတွက် ဒီအချက် (၅) ချက်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ
Copyright © 2019 Motivsuccess